Top 12 Spas ao Montreal
Ny toeram-pitsaboana ao Montréal dia manolotra sôkôlà sôkôla, fialana amin'ny fahatsapana sy fitsaboana
Sary natolotr'i Ovarium
Ny Montreal dia manasongadina ireo zava-niainan'ny spa an-trano, avy any amin'ny trano fisakafoanana anaty ala an-habakabaka sy ivelan'ny ranomasina mba hanasitranana ny masajara sy ny fitsaboana tsara tarehy. Iza anefa no tena tsara indrindra?
Ireo toeram-pisakafoanana 12 lehibe ao Montreal no nanao ny lisitry ny antony iray, na izany ho an'ny teny mivaingana mahazatra, toe-java-manahirana mahatsiravina, toetoetran'ny toeram-pitsaboana, fomba fitsaboana miavaka, na savoir-faire izay mitazona ny mpanjifa ho avy taona taona.
Sary natolotr'i Rainspa
Ao amin'ny efitrano fahatelo ao amin'ny Place d'Armes Hôtels & Suites, iray amin'ireo hotely avo indrindra any Montreal , Rainspa dia 2,500 metatra toradroa, izay manolotra tolotra nentim-paharazana toy ny mani-pedis, tarehy, fitsaboana, fitsaboana LED sy mikrodermabrasion tahaka ny fitsaboana.
Ny fitsaboana manokana ho an'ny lehilahy dia atolotra ihany koa ary angamba ny fanintona ankafizin'ny rehetra dia ny hammam an'ny Rainspa, toeram-pidiovana mafana sy mando mavesatra nentin'ny Morrocan nentim-paharazana sy ny fandroana Tiorka. Alao sary an-tsaina ny sauna, fa rano.
Ny fampiroboroboana ny "Montrealal voalohany sy tokana tokana fitsaboana tokantrano tokana ho an'ny lehilahy ihany", manolotra toeram-pitsaboana marary sy fitsangatsanganana eny amoron-drizareo ho an'ny lehilahy, manomboka amin'ny fampiroboroboana ny serivisy manscape, ny fitsaboana ny vatana ary ny fitsaboana ny volo ary toy ny spa tsara rehetra mety atolotra, fitsaboana fitsaboana. Ny endriky ny fomba fanasitranana dia ny dikanteny Soedoà, lalina ary vato mafana.
Ny fonosana MANN toy ny CEO sy ny MISTER MANN dia mampiaraka ny lamosiny amin'ny lamosina efa tranainy miaraka amin'ny mani-pedis maoderina sy maotina maherin'ny 60 minitra, mamonjy vola mpanjifa amin'ny tolotra ataon'ny tsirairay. Ho an'ny fanadiovana tsara indrindra, mifidiana ny DAY BIG, fitsaboana 150 minitra manambatra ny akanjon'ny fotsy, manikika, pedikure, endrika maneho, ary "fitsapana malefaka" fitsaboana ny tarehy.
Sary natolotry ny Strøm Spa Nordique
Ny fikarakarana spa iray mafana sy mangatsiaka, izay voahodidin'ny natiora ary tony eo afovoan'ny toeram-ponenana an-tanàn-dehibe dia lamandy lehibe. Strøm Spa Nordique dia miezaka mitady media mahafinaritra miaraka amin'ny nosy Nuns, tranobe midadasika ao Montréal, fantatra amin'ny toerana misy ala sy rano, ary ny spa dia mandeha 20 minitra avy any afovoan-tanàna Montreal, eo amoron'ny Lac des Battures, Ny farihy mitokana any an-dranomasina.
Ankoatra ny serivisy serivisy mahazatra toy ny endrika fanao, fitsaboana ary fitsaboana, dia manolotra fisehoan-javatra isam-bolana sy isan-karazany ny Strøm, fiaraha-mientana ara-tsosialy miaraka amin'ny fampakarana ny fahaiza-manaony manokana: batisan'ny rano. Famokaram-bady aman-trano, gourmet sakafo maraina sy fandroana, ary fitsangantsanganana iray andro izay ahitana fihaonam-be, fisaintsainana, yoga ary sakafo mahavelona manoloana ny fanolorana ny andro.
Ho an'ny fiainana andavanandro, andramo Strøm's Cøzy alakamisy. Ny fandroana fandroana, ny famafazana divay sy ny mofomamy dia mametraka ny mozika an-tariby hatramin'ny 11 ora hariva. Manandramana ny zoma eo ambanin'ny mixes DJ, ny martini bar, ary ny sakafo hariva hatramin'ny 1 maraina.
Sary natolotr'i Le Bath Room
Ny Bath Room dia mitondra ny ampahany amin'ny Ranomasina Maty any Montreal, ary mameno ny sakam-pandehan'ny boribory amin'ny sira Epsom izay manome ho an'ny mpanjifa fahatsapana fihoaram-pahefana, ilay lazaina ho fanalahidy amin'ny fiantraikan'ny fihetseham-pon'ny saina manontolo amin'ny fitsaboana.
Sarobidy eny amin'ny Plateau eo an-dalam-be ao amin'ny Rue St. Denis, ny Bath Room Le Bath dia tsy manao bihy fotsiny. Maherin'ny ampolony amin'ny fampiasana teknolojika masiaka. Fanapahan-kevitra tokana ho an'ny mpandahateny amin'ny teny anglisy. Ny fampahalalàn'ny tranonkala rehetra dia amin'ny teny Frantsay ihany.
Sary natolotry ny Spa Centrale Parc
Teny roa: sotro sôkôla. Ahitana ny sôkôla belarosy sy ny ody fanaingo, Spa Centrale Parc dia milaza fa ny fitsaboana sôkôla amin'ny sôkôla tsy manam-paharoa dia mampiseho ny fihetseham-pon'ny euphorika sy ny fiantraikany amin'ny alikaola rehefa manampy amin'ny fanavaozana ny hoditra.
Ny spaoro any Plateau manodidina ny Parc La Fontaine , Spa Centrale koa dia manolotra rononon'ny ronono sy lakan-drano, ary ny fidirana an-tsokosoko ao anaty haavo, osteopathie, fitsaboana, fitsaboana ary fitsaboana naturopathika.
Ny fitsaboana nentim-paharazana toy ny tarehy, ny mani-pedis, ary ny fitsaboana ny vatana dia omena. Ny pika misongadina? Andramo ny fomban-tsakafon'ny Chocolate miaraka amin'ny siramamy manomboka amin'ny siramamy amin'ny siramamy sy ny vovobony amin'ny vatany arahin'ny fofom-bolo vita amin'ny sôkôla Belzika sy ny masatra.
Ny spa Ovemiera Rosemont dia mandray ny teknolojia avo lenta hialana sasatra sy fitsaboana amin'ny Pulsar izay fitsaboana ny fotoana sy ny ezaka efa niainan'ireo mpitsabo efa nahazatra ny fanjakana. Ny fangatahana ny mpanjifa dia mitafy kofehy stereo sy lobaka miavaka miaraka amin'ny jiro LED mialohan'ny maso tsirairay izay mamoaka hazavana amin'ny rhythms noforonin'ny headphones, ny mozika sy ny hazavana ao Pulsar dia mampiditra ny atidoha ho an'ny fifindra-monina amin'ny fahamoram-pahavoazana.
Ny Ovarium dia manolotra ihany koa ny NeuroSpa, "seha-tombo-tsavily tsy misy elanelana sy mifamatotra izay manamora ny famakiana manontolo sy ara-batana tanteraka." Ny fampiroboroboana ny sofina dia mihaino ny mozika ny mpihaino ho toy ny "vibrations harmonique marinônôma" avy amin'ny sezafiokely miaraka amin'ny tsangambatom-pasika, manandratra ny rafi-pitabatabana ao an-toerana. Izany dia tsy voatery hisoroka ny aretin-kozatra ateraky ny areti-maso ary mampihena ny fihenjanana ao amin'ny vatana.
Fa ny tena mahafantatra ny Ovarium dia ny batisan-drivotra tokana miavaka, ny atody sy ny siramamy fisakafoana mitoka-monina ary 2,000 kaopy ny sira Epsom. Ny fitantànana dia milaza fa ny filoha Ovarium sady mpanolontsaina Spa Bernard Meloche no nitondra ity karazana fialamboly ity ho an'i Montreal, tamin'ny 1982, izay nentanin'ny manam-pahaizana Amerikana John C. Lilly izay nanamboatra tobim-panafody tamin'ny 1954.
Sary natolotry ny Spa Scandinave
Ny fanolorana toeram-pisakafoanana indostrialy any an-tokotany ao afovoan'i Montreal taloha, anisan'ny spa Scandinave Spa dia akaiky ny isan-karazany amin'ny toetr'andro, toeram-pisakafoanana ambony, hotely ary safidy alina.
Ny spa Scandinave dia manana toeram-pisakafoanana eukalyptus, sainam-pirenena, rano mafana, kilaometatra mangatsiatsiaka, sehatra fantsona, ary toerana fialan-tsasatra. Samy hafa ny karazana fanasitranana.
Sary natolotr'i Bota Bota
Ny fitsaboana malaza indrindra an'i Montreal no azo lazaina fa Bota Bota no manana fahasamihafana miavaka amin'ny maha sambo azy. Basy spa. Miorina mandrakizay eo amin'ny ilany atsinanan'ny seranan-tsambo taloha eo akaikin'ny McGill, dia mahita ny fomba fijery mahavariana momba ny seranana, Old Montreal, ary ny manodidina ny renirano rehefa mandalo amin'ny faritry ny làlan'i Bota Bota ianao.
Fomba fitsaboana, fitsaboana, akanjo, mani-pedis ary trano fisakafoanana eo an-toerana manatitra lovia toy ny salady tartare, papel ravin-kena, ary ronono vita amin'ny varimbazaha.
Bota Bota dia fantatra ihany koa amin'ny hetsika fialantsasatra mahafinaritra, toy ny Easter Brunch , ny Andro Valentin , ary ny taom-panavotana ny taona vaovao izay matetika no mampiseho ny kilasy yoga sy ny harpa velona.
Sary natolotr'i Spa Bolton
Raha hanao dia lavitra mandritra ny adiny roa ivelan'i Montreal, andramo Spa Bolton. Ny faritra afovoan-tanàna dia mijery matetika ireo mpizahatany amin'ny fampahalalam-baovao mahery fihetsika mahery vaika, saingy i Bolton dia mampiseho zavatra izay tsy ananan'ny hafa: ny fidirana amin'ny rivo-doza voajanahary avy amin'ny Reniranon'i Missisquoi miontana eo afovoany. Raiso ny ririnina mandavantaona any amin'ny renirano midadasika rehefa tonga ririnina. Amin'ny lohataona, milomano manoloana ny rotsak'orana ary mipetraha eo ambany fifehezan'izy ireo (soso-kevitra: zava-mahatalanjona izany raha toa ka mitandrina tsara ianao, ny làlambe dia marefo).
Nalaina tamin'ny balsam-pofona vita amin'ny eucalyptus, saosy sotro, fitsidiam-pitaterana mafana miaraka amin'ny 130 fiaramanidina rano mamono mpanjifa rehefa mandro, dobo marary, ary bala mangatsiaka mangatsiaka, spa Bolton ihany koa dia manana Savusauna, izay iray ihany amin'ny karazana azy any Canada, angamba Amerika Avaratra. Sakafo fisakafoanana finnois izay mandoro hazo. Tsy misy rameva, mameno ny efitrano ny setroka. Ny sampana poplar dia ampiasaina hanesorana ny hoditra rehefa miala sasatra ao amin'ny Savusauna.
Ny tolotra eo an-toerana hafa dia ahitana ireo ahiahiana mahazatra: ny fanasitranana, ny tarehy, ny mani-pedis, ary ny fitsaboana ny vatana. Ny famonoana dia mety ho ny lakandranon'i ivelany na tranokely manakaiky ny renirano, ao anatin'ny halavirana mihodina amin'ny rian-drano.
Sary natolotr'i Skyspa
Ao amin'ny Brossard, faritra lehibe ao Montréal ao atsimon'ny metropole, Skyspa dia manolotra fanandramana ara-pahasalamana amin'ny tafo miaraka amin'ny fanampiana ireo sauna sinoa, rano fisotro, kalandrie kalitaona, riandrano nosy ary faritra misy toeram-pialan-tsasatra.
Ny fikarakarana marary sy ny fikarakarana hatsaran-tarehy dia azo jerena eo an-toerana. Ary tohizo ny sain'ny skyspa's Sauna sauce. Misy sauna goavam-be iray alemà izay misy rano sy iankin-dray manidina amin'ny alàlan'ny fatana sauna, ny torimaso Ongussmeister dia mitarika ny aretin-koditra mankany amin'ny ranomandry.
Sary natolotry ny Spa Escale Santé
Ny fampiroboroboana zava-manandraman'ny spa ao Montreal amin'ny East End, ny spa Escale Santé dia manolotra karazana fitsaboana sy serivisy marobe toy ny fitsaboana maotera, toeram-pisakafoanana islandey, fandroana avy any avaratra, tarehy, vatana, mani-pedis, fitsaboana, trondro fitsaboana trondro ny fitsaboana sy ny fitsaboana amin'ny fiterahana ary tsara indrindra ho an'ny vehivavy bevohoka, ireo izay efa teraka, na dia ho an'ny vehivavy aza raha mieritreritra ny hanan-janaka amin'ny toerana voalohany.
Misy fitsaboana tsy fahita firy antsoina hoe electrocoagulation koa ao amin'ny sakafo. Fitsaboana izay mikendry ny hampihenana ny endriky ny rosacea sy kapilara tapaka. Ny zava-pisotro maimaim-poana (anisan'izany ny fako) sy ny toerana fialana amin'ny lahatsary dia ampahany amin'ny fonosana.
Sary natolotry ny Victoria Park
Ao amin'ny Westmount, iray amin'ireo tanàna manodidina indrindra ao Québec, ny Victoria Park Spa dia manome fitsaboana maromaro (fitsaboana fitsaboana, fitsangatsanganana ara-pahasalamana, fiompiana, fitsaboana amin'ny vatana), saingy tsy dia betsaka loatra io farany noho ny fitsaboana spa ao amin'ity lisitra ity.
Ny fametrahana ny Victoria Park amin'ny toeram-pitsaboana hafa dia ny seraseram-pitsaboana ara-pahasalamana, avy amin'ny injectables (dermal fillers, Botox), mba hijerena vatana amin'ny laser fitsaboana. Manana fikambanana ara-pahasalamana miaraka amin'ny yoga, barre, ary ny kilasim-pilepila misy eo an-toerana i Victoria Park. Ny fitsaboana ho an'ny lehilahy ihany koa dia ao amin'ny sakafo.
Zaridainan 'i Apple akaikin'i Montreal
Ny Fireworks Montreal 2017-2018
Toerana onenana eo akaikin'ny kianja olaimpika ao Montreal
Montreal tamin'ny Martsa Weather and Event Guide
Top 7 Boutiques ho an'ny Vintage Shopping any Montreal
Museum Museum Montreal Redpath: Avy amin'ny mummies taloha ho any amin'ny lohataonam-bahoaka
Ny tari-dàlana manan-danja amin'ny Seven Rugby Hong Kong
Ny tanàna lehibe indrindra mampidi-doza azonao jerena
Ny ankizy dia mihinana maimaimpoana amin'ny fikarakarana any St. Louis
Tsy maintsy mahita Sites ao Luang Prabang, Laos
Mankalaza ny fetiben'ny Gay Pride any Alabama
The Ritz Carlton, Bachelor Gulch: Wonderland Winter Winter
Ahoana no hialana amin'ny fivilian-tsambo manerana ny firenena?
Andro manan-tompo amin'ny andro firavoravoana amin'ny andro firavoravoana ao Raleigh, Durham ary Chapel Hill
Toerana nialan'i Los Angeles County
Ski Destinations any Shina
Toeram-ponenan'ny Dogs ao Phoenix
Connecticut Water Parks sy Fialam-boly